Ihe ngosi enyere na Oppo A12 | Gam akporosis
Oppo A12 leaked image na ụdịdị
El OPPO A12 Ọ bụ otu n'ime ndị na-esonụ mmefu ego smartphones si ama Chinese emeputa. A na-atụle mbata ya maka ọnwa a yana njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ, nke akwụsịbeghị ịbụ asịrị igwe asịrị.
Es Pricebaba ọnụ ụzọ nke kesara ọtụtụ isi àgwà nke ekwentị a na nso nso a. Weebụsaịtị ahụ egosila na onyinyo a dị ntakịrị njedebe tupu ya amalite, yabụ anyị amalarịrị ihe ọdụ a na-atụ anya ma dị ọnụ ala ga-adị.
Kedu ihe ị ga-atụ anya n'aka Oppo A12?
Nyeghachi Oppo A12
Dị ka ozi ọhụrụ si dị, Oppo A12 bụ ama na O nwere ihuenyo teknụzụ IPS LCD nke nwere mgbatị 6.22-inch na mkpebi HD + nke ga-abụ 1,520 x 720p. Onye a nwere ụdị ọkọlọtọ mmiri ozuzo na-achakarị ma na-agagharịkarị ma ọ bụ obere bezels dị warara nke ejiri obere olu akpọ na-akwado.
Mediatek's Helio P35 bụ ikpo okwu mkpanaka anyị na-ahụ n'okpuru mkpuchi nke ngwaọrụ a. Chipset 12nm kwuru na atụmatụ 53 GHz Cortex-A2.3 isi asatọ. Ihe kariri 3 W.
Azụ Oppo A12 nwere modulu foto nke nwere oghere 13 MP nwere oghere f / 2.2 yana onye na-agba agba nke abụọ MP na oghere f / 2. Igwefoto selfie nke edobere na ọkwa ahụ bụ 2.4 MP (f / 5). Kedu ihe ọzọ, A gam akporo OS nke dabere na ColorOS 6.1.2 ga-abata n’elu ya na ngwaọrụ. Ọ dịkwa mma ịmara na ọ tụrụ 155.9 x 75.5 x 8.3 mm ma tụọ gram 165.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo A12 leaked image na ụdịdị
Redmi Band ga-abata taa ma ọ ga-eme ya na agba dị iche iche
[Video] Ihe ọ bụla nke ụdị Telegram 6.0.1 ọhụrụ ahụ na-enye anyị: Mpempe akwụkwọ mechara rute !!